Umaki: okuqukethwe kokuthengisa | Martech Zone
Maka: okuqukethwe kokuthengisa
I-Showpad: Okuqukethwe Kokuthengisa, Ukuqeqesha, Ukubandakanya Komthengi kanye Nesilinganiso
ULwesibili, May 12, 2020 NgoLwesine, ngo-Okthoba 1, 2020 Douglas Karr
Njengoba ibhizinisi lakho likhipha amaqembu okuthengisa, uzothola ukuthi ukuseshwa kokuqukethwe okusebenzayo kuba yisidingo sobusuku bonke. Amathimba okuthuthukisa amabhizinisi afuna amaphepha amhlophe, ama-case studies, imibhalo yamaphakeji, ukubuka konke kwemikhiqizo nensizakalo… futhi afuna ukuthi enzelwe ngokwezifiso zemboni, ukuvuthwa kwamakhasimende, nosayizi wamakhasimende. Kuyini Ukuthengiswa Kwezokuthengisa? Ukunika Amandla Ukuthengisa kuyinqubo ehlelekile yokuhlomisa izinhlangano zokuthengisa ngamathuluzi afanele, okuqukethwe, nolwazi lokuthengisa ngempumelelo. Inika amandla abathengisi abasebenza kabusha
NgoMsombuluko, Februwari 24, 2020 NgoMsombuluko, Februwari 24, 2020 UCarson Conant
Ngenkathi ubuchwepheshe bokunika amandla okuthengisa kufakazelwa ukuthi bukhuphula imali ngo-66%, izinkampani ezingama-93% kusafanele zisebenzise ipulatifomu yokuvumela amandla okuthengisa. Lokhu kuvame ukubangelwa izinganekwane zokunikwa amandla okuthengisa kubize kakhulu, kuyinkimbinkimbi ukuhambisa futhi kunamazinga aphansi okutholwa. Ngaphambi kokungena ezinzuzweni zepulatifomu yokuthengisa enika amandla nokuthi yenzani, ake siqale singene kokunikezwa kokuthengisa nokuthi kungani kubalulekile. Kuyini Ukunika Amandla Ukuthengisa? Ngokusho kweForrester Consulting,
NgoLwesithathu, Agasti 17, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 UJohn-Henry Scherck
Ukuthengisa, njengemboni, kuguquka ngokushesha okukhulu. Amaqembu okuthengisa ahlala ekwazile ukwenza ukuthuthuka okuthe xaxa kwezindlela ezinhlelweni zawo, kepha kule minyaka embalwa edlule, ukuthengisa kungene enkathini entsha ekhuthazwa ubuchwepheshe, ukuhlaziywa kanye noshintsho olukhulu ekuziphatheni komthengi. Abaphathi bezentengiso babeke ukugxila okusha ekusebenziseni ubuchwepheshe ukukala umsebenzi wokuthengisa nokuthuthukisa ukusebenza ngokuhlaziya ngobuningi nangokuzama ngamasu namasu. Uma uqhathanisa i-
Lwesibili, Disemba 1, 2015 Douglas Karr
Mhlawumbe lokhu bekufanele kube yi-infographic kungaba isincomo esisodwa esikhulu… thola abafundi ukuba baguqule! Ngokuzimisela, sididekile ngokuthi zingaki izinkampani ezibhala okuqukethwe okungatheni, hhayi ukuhlaziya amakhasimende abo, nokungathuthukisi amasu wesikhathi eside okuqhubela abafundi kumakhasimende. Ukuya kwami ​​ekucwaningeni ngalokhu kuvela kuJay Baer othole ukuthi iposi elilodwa lebhulogi libiza inkampani $ 900 ngokwesilinganiso. Hlanganisa lokhu neqiniso lokuthi i-80-90% yakho konke
5 Imibono eyiphutha Yokumaketha Neqiniso
NgoLwesihlanu, Septhemba 11, 2015 NgeSonto, Septhemba 13, 2015 Douglas Karr
Sisebenzela isiphakamiso khona manje lapho ithemba lithe bafuna ukuhamba ngokushesha. Abathengisi abaningi bangaconsa amathe ngethuba lokuthola isiginesha esheshayo, kepha manje ngiyibuka njengesibonakaliso sesixwayiso. Ukuhamba ngokushesha ngokujwayelekile kuholela ekulindeni kokuthola imikhondo ngokushesha. Yize lokho kungenzeka kuze kube siyihlaziya kahle iklayenti, umncintiswano, nethuba, asiqiniseki ukuthi singayithola ngokushesha kangakanani imiphumela. Ingabe
I-Storyworks1: Ipulatifomu Yokulethwa Kokuqukethwe Kwe-Digital Sales Delivery
NgoLwesibili, ngoJulayi 7, i-2015 Douglas Karr
I-Storyworks1 ihlinzeka ngeplatifomu yesethulo esisebenzisanayo sokuhlomisa iqembu lakho lenkambu ngamathuluzi okusiza ukukhulisa ukuthembeka, ukuvumelanisa isu lokumaketha nokwenziwa kokuthengisa, nokukhulisa ubudlelwano bebhizinisi ngokuqonda kwesikhathi sangempela nedatha esebenzayo. I-Opportunity Locator entsha ye-Storyworks1 inikeza abasebenzi bezentengiso amandla okuvumelanisa indawo yabo yamanje ne-CRM ngedivayisi yeselula ukuze benze imephu yendawo eseduze nezindawo zamakhasimende namaphrofayli. I-Opportunity Locator yenza ngokwezifiso ulwazi olususelwa ku-
Ungayikhetha Kanjani Isixazululo Sokuthengisa Okuzenzakalelayo
NgoLwesibili, ngoJulayi 15, i-2014 NgoMsombuluko, Novemba 9, 2020 UJenn Lisak Golding
Ngenkathi abathengisi bengaba nezinketho eziningi kakhulu okwamanje, ezinye izimboni zingena esikhaleni esizisebenzelayo ukwenza izimpilo nemisebenzi ibe lula. Emhlabeni weziteshi eziningi, asikwazi ukuphatha yonke into futhi lokho kusho nemisebenzi elula yokuphatha eyake yaba ne-20% yosuku lwethu. Isibonelo esiyinhloko senye yezimboni ezithatha ukweqa okukhulu esikhaleni esizisebenzelayo kungaphakathi kokuthengisa ngaphakathi; ngokusobala, i-Salesforce.com ibe enkulu